NASDAQ Chief: Kaadị bụ ihe ziri ezi nzọụkwụ ọzọ na ohere nke ego
Nasdaq onyeisi Adena Friedman kwuru banyere cryptocurrency na ọhụrụ na nwunye nke CNN podcast onyeisi Files, Friedman kwuru na cryptocurrency ele ka "ikike nzọụkwụ ọzọ na ohere nke ego" n'ihi na a "globalized ugwo usoro" bụ a eke kwesịrị ekwesị maka cross-ókè-ala digital aku na uba.
o kwuru, sị: "Olee otú ọ evolves na nke nke cryptocurrencies nwere ike ma ọ bụrụ onye ihe na-emecha-ego n'anya nakweere, M na-eche na n'ezie juri bụ ka si na na. Ma, m na-eme na-eche echiche nke a ọzọ globalized ugwo usoro na-bụ ihe oru oma karịa ihe anyị nwere taa na-enye ohere maka ego nyefee gafee mba na-akwado ndị na-Internet aku na uba. "
Stock trading ngwa Robinhood ewelite mmezi $ 363M mụbaa ya kaadị trading ọrụ
US dabeere mobile ngwaahịa trading ngwa Robinhood ka a mara ọkwa a $363 nde usoro D ego gburugburu na ọ na-ekwu ga-ekwe ka ike mụbaa ya cryptocurrency trading ọrụ mba site ọgwụgwụ nke 2018.
Dị ka a na nkwupụta bipụtara na Thursday, ego gburugburu ji ike na $5.6 ijeri.
De beers ọma tracks diamonds na nke m na ere goodu iji blockchain
De beers Group mara ọkwa taa na ọ ọma esoro 100 diamonds tinyere uru yinye n'oge pilot nke ya ụlọ ọrụ blockchain n'elu ikpo okwu, marking oge mbụ a diamond njem e digitally esoro na nke m na-ere ahịa.
An immutable na ala digital nzọ ụkwụ e kere a nhọrọ nke ike ike diamonds mined site De beers ka ha si m ndị cutter na polisher, mgbe site na a ere goodu. The n'elu ikpo okwu, akpọ Tracr, na-atụ anya n'ihu ọha ẹkedori mechara nke afọ a.
Kaadị ọṅụ Mike Novogratz: Kaadị bụ ndị mmadụ mgbanwe
“Nke a bụ ndị mmadụ mgbanwe,” Michael Novogratz nke Galaxy Digital gwara ìgwè mmadụ na Fluidity Summit na Brooklyn on Thursday.
o kwuru “The decentralized mgbanwe na-aga nwere ya nnukwu mmetụta na retail uche, ma iji ruo ebe ahụ ọ ga-ewe ego ike nke nnukwu oru. The institutional ìgwè ehi bụ na-aga n'ihu,” agbakwunye “M ọzọ bullish afọ a karịa m bụ afọ ikpeazụ.”
Prototype nke nzuzo oru ngo “Dandelion” mepụtara Bitcoin devs
Developers na-enwe olileanya ime ka a elu nke azụmahịa anonymity na Bitcoin blockchain wuru a prototype maka ha “Dandelion” nzuzo oru ngo.
The prototype agwa nchegbu na mbụ Dandelion amaghị na ike-gụrụ a deanonymization agha.
kaadịcryptocurrencyozin'elu ikpo okwutrading
Next Post:Trading Bots maka Cryptotrading